musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » IMEX America: Zvakanaka Kudzoka!
IMEX America 2021 Kuvhara Press Musangano
Mushure mevhiki yakabatikana inotsanangurwa nekunzwa kwakanyanya kwe "zvakanaka kudzoka," IMEX Sachigaro Ray Bloom uye CEO Carina Bauer vakabatanidzwa papodium yeIMEX America yekuvhara musangano wevatori venhau naSteve Hill, CEO uye Mutungamiriri weLVCVA; Paul VanDeventer, Mutungamiriri uye CEO weMPI; naStephanie Glanzer, Chief Sales Officer & Senior Vice President paMGM Resorts International.
Vanopfuura 3,300 vatengi vaivepo kuIMEX America svondo rino neruzhinji rwavo rwakagamuchira vatengi.
Chiitiko chakaitika kuMandalay Bay muLas Vegas chakaona makambani anodarika zviuru zviviri nemazana maviri anomiririra nyika dzinopfuura mazana maviri.
Paive neanosvika zviuru makumi mashanu ekugadzwa kwakaitwa nemhinduro inoratidza chiitiko ichi chakagadzira bhizinesi rakasimba kune varatidziri.
Ray akamaka chinyorwa chechi10 che IMEX America nenhamba yake yechinyakare yenhamba dzebhizinesi kubva svondo: “Vatengi vanopfuura 3,300 vaive pano svondo rino, ruzhinji rwavo rwakagamuchira vatengi. Taivewo nemakambani anodarika zviuru zviviri nemazana maviri airatidza makambani anomiririra mazana maviri pamwe nenyika. Kugadzwa kwaive kwakatenderedza 2,200 uye mhinduro inoratidza kuti vakagadzira bhizinesi rakasimba kune varatidziri. Chakanyanya kucherechedzwa yaive mhando yebhizinesi uye maRFPs aibva pakugadzwa nevatengi vanenge varipo. "
Carina akawedzera pamusoro kudiwa kwebhizimisi kunoratidzwa mukati mevhiki. “Zvave zvichifadza uye zvinofadza kunzwa nyaya dzakawanda dzekudzoka. London & Partners, shamwari dzedu dziri pano nhasi, LVCVA, uye akawanda akawanda, kusanganisira mapoka emahotera akadai seMandarin Oriental, vose vakashuma mapombi emabhizimisi akasimba kusvika muQ3 gore rinouya uye muna 2025. Vhiki rino reIMEX rakatipa tose chikonzero chekutenda remangwana reindasitiri rakajeka.”
Mamiriro emukamuri aya ainakidza sezvo nhengo yese yedare yakagovana nyaya dzebudiriro uye kupa mutero mukusimba uye kuchinjika kweindasitiri yezviitiko zvebhizinesi repasi rose, sezvakaratidzwa paIMEX America nehukuru uye chiyero cheshoo yegore rino mushure menguva pfupi kusvika maviri. makore ekudzima indasitiri.
Innovation uye kutanga
Senguva dzose, IMEX America inopa hupfumi hwezvirongwa nemikana mukuwedzera kune takatarisana nebhizinesi. Vhiki rino vakasanganisira anopfuura mazana maviri ezvidzidzo zvedzidzo, mateki matsva edzidzo, People & Planet Village itsva ine "misfit" yemuchero uye yemiriwo muto bar pamwe nekusimbisa zvikamu, Tech Therapy Area, uye chirongwa chemazuva ese chekugara zvakanaka chakaratidza chinyakare #IMEXrun pa. Chitatu mangwanani.
Nyanzvi dzepasi rose nevatauri, dzidzo yehunyanzvi yemakambani, uye masangano uye vatariri veajensi, pamwe newekishopu uye zvirongwa zvevadzidzi nevadzidzisi, vakapedza svondo rekusanganazve.
Carina akapfupisa: "Sezvakawanda zvenyu, timu yedu yakashanda kwenguva yakareba uye nesimba kuti IMEX America 2021 ibudirire. Isu takakurudzirwa nekuziva kuti wanga uchiona, kumirira uye kuzvida muhupenyu nekuti zvinoreva zvakanyanya kune yedu indasitiri yepasi rose. Hatina kukwanisa kuzviita pasina iwe. Kunyanya kukosha tinokuitira iwe nekuti isu tinotenda zvakanyanya mukukosha kwehupfumi uye nemhedzisiro yakanaka yeindasitiri iyi pasirese. Vhiki rino raratidza kuti - pamwe chete - tadzoka, uye tadzokera mubhizinesi. Nyangwe manga musiri mumba, tinoziva kuti makainzwa muri kure.”
Mazuva eIMEX America 2022 akasimbiswa saGumiguru 11 - 13, neSmart Muvhuro, inofambiswa neMPI muna Gumiguru 10.